Jesoa ao amin' ny kristianisma - Wikipedia
I Jesoa na Jesosy na Jeso dia Jiosy tany Palestina izay inoan' ny Kristiana ho zanak' Andriamanitra nirahina ho ety ambonin' ny tany hanavotra ny olombelona tamin' ny alalan' ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona indray. Izy no foto-pisian' ny Fivavahana kristiana.
Fanaovam-batisa an' i Jesoa
Araka ny Filazantsara dia efa nisy talohan' izao rehetra izao i Jesoa. Izy no ilay Teny (na Logos) izay nahariana izao tontolo izao. Izy no ilay Teny tonga nofo. Notorontoronina tamin' ny Fanahy Masina izy ka naterak' i Maria virijiny. Zanak' Andriamanitra izy. Nitsangana ho velona rehefa maty noho ny fanomboana azy tamin' ny hazo fijaliana hanavotany ny olombelona. Ho avy indray i Jesoa amin' ny andro farany hitsara ny olona rehetra ka handray izay mino azy ho any amin' ny Rainy.
1.2 Ny fiantsona an' i Jesoa
1.3 Ireo olona mitovy anarana amin' i Jesoa na Jesosy
2 Ny tantaran' i Jesoa araka ny Baiboly
2.1.1 Firazanan' i Jesoa
2.1.2 Fanambaràn' ny anjely Gabriela ny hahaterahan'i Jesoa
2.1.3 Ny fahaterahan' i Jesoa
2.1.4 Ny fandripahana ireo zaza tsy manan-tsiny nataon' i Herôda
2.2 Ny asan' i Jesoa
2.2.1 Fanombohan' ny asan' i Jesoa
2.2.2 Fandrosoan' ny asa sy fankahalana setrin' izany
2.2.4 Fisamborana sy fitsarana ary fanomboana an' i Jesoa
2.2.5 Fitsanganan' i Jesoa ho velona sy iraka nampanaoviny
3 Ny finoan' ny Kristiana momba an' i Jesoa
3.1 Ny finoana ny maha Andriamanitra an' i Jesoa
3.1.1 Ny fampianarana "mahitsy" momba ny Trinite
3.1.2 Fampianarana hafa momba ny maha Andriamanitra an' i Jesoa
3.2 Ny tsy finoana ny maha Andriamanitra an' i Jesoa
3.2.1 Ny firehana teo amin' ny tantara
Ny anaran' i JesoaModifier
Ny fiantsona an' i JesoaModifier
Mba hiavahany amin' ireo Jesoa, Jesosy na Josoa hafa dia matetika asiana fanampiny io anarana io ka manome ny hoe Jesoa Kristy (Jesosy Kristy), Kristy Jesoa (Kristy Jesosy) na Jesoa avy any Nazareta (Jesosy avy any Nazareta). I Nazareta no tanàna niaviany. Antsoina fotsiny amin' ny hoe Kristy koa izy. Ny hoe Mesia dia iantsoana azy ihany koa nefa tsy matetika izany, na dia mitovy hevitra amin' ny hoe Kristy. Ny hoe Kristy dia avy amin' ny teny grika hoe Χριστός / Khristos, izay fandikana ny teny hebreo hoe Meshiakh na Mashiakh, ka midika hoe "voahosotra", izany hoe voahosotr' Andriamanitra hanafaka an' i Israely araka ny voalaza mialoha ao amin' ny Baiboly hebreo. Mety hialohavan' ny teny hoe Tompo ihany koa io anarana io ka ahazoana ny hoe Tompo Jesoa na Tompo Jesosy izay hafohezina indraindray amin' ny hoe Tompo fotsiny.
Ireo olona mitovy anarana amin' i Jesoa na JesosyModifier
Manonona olona 12 mitondra an’ io anarana io i Flavio Jôsefa (Jiosy mpahay tantara tamin’ ny taonjato voalohany), ary tsy anisan’ izany ireo voaresaka ao amin’ ny Baiboly. Hita koa io anarana io ao amin’ ireo boky apôkrifa na boky tsy anisan’ ny Baiboly, izay nosoratana nandritra ireo taonjato vitsivitsy talohan’ i Kristy.
Ilay anarana hoe Ἰησοῦς / Iêsoûs izay hita ao amin’ ny Testamenta Vaovao tany am-boalohany ao amin’ ny Asan’ny Apôstôly (Asa 7.45) sy ny Epistily ho an'ny Hebreo (Heb. 4.8), dia manondro an’ i Josoa, ilay mpitarika an' i Israely taorian’i Mosesy.
Razamben’ i Jesoa Kristy, ary azo inoana fa avy amin’ ny reniny (Lio. 3.29) atao hoe Josesy no hita ao amin’ io andininy io, ao amin’ ny sora-tanana fahiny sasany.
Misy Kristiana mpiara-miasa tamin’ i Paoly, ary azo inoana fa Jiosy izay nantsoina koa hoe Josto izy (Kol. 4.11).
Ny tantaran' i Jesoa araka ny BaibolyModifier
Ny tantara izay hofintinina eto dia izay hita indrindraindrindra ao amin'ny Filazantsara efatra sy ny Asan' ny Apôstôly ao amin' ny Baiboly.
Firazanany sy fahaterahany ary fahazazanyModifier
Firazanan' i JesoaModifier
Araka ny Filazantsara dia taranak' i Davida i Jesoa (Mat. 1.1-17 ; Lio. 3.23-38).
Fanambaràn' ny anjely Gabriela ny hahaterahan'i JesoaModifier
Nambaran' ny anjely Gabriela an' i Maria mialoha fa hiteraka an' i Jesoa izy. Teraka tao Betlehema i Jesoa raha namonjy fanisam-bahoaka ao ny ray sy reniny dia i Josefa sy i Maria.
Ny fahaterahan' i JesoaModifier
Ny fahaterahan' i Jesoa dia nambaran' ny anjely tamin' ny mpiandry ondry izay tonga namangy ny zazakely. Efapolo andro taorian' izay dia nentina tany Jerosalema i Jesoa amin' ny maha voalohan-teraka azy mba haseho any amin' ny tempoly araka ny lalàna hebreo (Lio. 2.21-24). Tonga namangy an' i Jesoa koa ny Magy.
Ny fandripahana ireo zaza tsy manan-tsiny nataon' i HerôdaModifier
Atahoran' i Herôda ny hisian' ny olona mety hisolo azy amin' ny maha mpanjaka azy ka nieritreritra ny hamono ireo zazakely latsaky ny roa taona tao Betlehema. Natahotra ny fandripahana kasain' i Herôda hatao i Jôsefa sy i Maria araka ny tenin'ny anjely tamin' i Jôsefa amin' ny alalan' ny nofy ka lasa nandositra tany Egipta. (Mat. 2.13-23).
Ny asan' i JesoaModifier
Fanombohan' ny asan' i JesoaModifier
Azo lazaina ho tamin' ny nahavitan' i Joany (na Jaona) ny fanaovam-batisa an' i Jesoa tao amin' ny ony Jordana ny fotoana nahafahany nanomboka ny asany. Taorian' ny nampidirana am-ponja an' i Joany izany. Tany an-tany efitra izy tanatin' ny efapolo andro alohan' ny tena hiasany. Tao no naka fanahy azy ny devoly na demony. Nifindra nanaraka azy taorian' izany ry Joany mpanao batisa sy ny mpianany roalahy dia i Andrea sy i Joany (zanak' i Zebedio). Nanatevina koa i Simôna Petera (na Piera). Nisy fotoana nankanesan' i Jesoa tany Galilea hitsidika ny fonenany ao Nazareta (Lio. 4.16-30). Nankany Kapernaomy izy nanomboka nampianatra momba ny Fanjakan' Andriamanitra sy nanasitrana marary maro.
Fandrosoan' ny asa sy fankahalana setrin' izanyModifier
Fananganan-ko velona an'i Lazarosy, nataon'i Carl Heinrich Bloch, taona 1870.
Nampianatra ny amin' ny fitiavan' Andriamanitra tsy misy fepetra an' ireo osa sy mahantra sy ny amin' ny fiainana mandrakizay ho an' ny mpanota izy indrindra nandritra ny toriteny nataony teo an-tendrombohitra. Ny fanamafisany ny fahambonian' ny fahadiovam-po miohatra amin' ny fanajana ny lalàna jiosy dia nahatonga ny fankahalan' ny Fariseo azy izay nanahy sao hiala amin' ny lalàna ny olona. Ny Jiosy sasany koa dia natahotra sao mampiahiahy ny fitondrana rômana izany fampianarana izany ka tsy hahatanteraka ny fananganana indray ny fanjakana jiosy.
Nitombo ihany anefa ny lazan' i Jesoa na teo izany fanoherana sy fankahalana azy izany. Nanohy nampiely ny fampianarany eran' i Galilea sy tamin' ireo mpianany izy. Nankany Betania aloha izy (Mar. 11.11-12) ka tamin' izany no nananganany an' i Lazarosy (na Lazara) ho velona (Joa. 11.1-44). Nankany Efraima koa izy hanohy ny asany (Joa. 11.54). Ny fotoana nanan-danja indrindra dia ilay fotoana nanambaràny tamin' i Petera ny maha zanak' Andriamanitra azy (Mat. 16.16; Mar. 8.29; Lio.9.20). Nolazainy mialoha koa ny hahafatesany sy ny hitsanganany amin'ny maty.
Fotoana faramparany nanaovany ny asanyModifier
Rehefa nanakaiky ny andron' ny Paska jiosy dia nankany Jerosalema farany i Jesoa. Tamin' izany no nandroahany ireo mpivarotra nahazo alalana hivarotra teo ivelan' ny tempoly (Mar. 11.15-19). Tany koa no nitrangan' ny fifanandrinana tamin' ny lohandohan' ny Mpisorona sy ny Fariseo (na Farisiana) ary ny Sadoseo (na Sadoseana) ny amin' ny nahazoany ny fahefany sy ny hetra aloa amin' i Kaisara ary ny fitsaganan' ny maty ho velona. Nambarany tamin' ireo mpianany ny famantarana ny hiverenany ety an-tany indray. Natahotra ny Mpisorona sy ny Mpanoradalàna sao mampirongatra ny fangejan' ny Rômana ny vahoaka Jiosy izao zavatra ataon' i Jesoa izao (Joa. 11.48) ka nanakarama an' i Jodasy Iskariôta mba hanolotra an' i Jesoa hosamborina sy hovonoina.
Fisamborana sy fitsarana ary fanomboana an' i JesoaModifier
Ilay Sakafo hariva, nataon'i Leonardo da Vinci, anelanelan' ny taona 1495 sy 1498.
Tamin' ny sakafo hariva farany niarahany tamin' ireo mpiananany i Jesoa no nanambara ny hamadihan' ny iray amin' izy ireo azy sy ny hahafatesany tsy ho ela, ho sorom-panavotana ny olombelona rehetra eto ambonin' ny tany. Nankany amin' ny Tendrombohitra Ôliva i Jesoa sy ireo mpianany ka tao izy no niaritra ny fahorian-tsainy amin' ny fiomanana ny hofaty. Nambarany tamin' izany ny hitsanganany ho velona, avy eo izy nankeo amin' ny sahan' i Getsemane mba hivavaka (Mat. 26.30-32; Mar. 14.26-28). Teo izy no nosamborin' ny vahoaka marobe sy miaramila rômana izay notarihin' i Jodasy Iskariôta.
Nentina hotsaraina teo anatrehan' ny Sinedriona i Jesoa ka teo izy no nanontanian' i Kaiafa raha izy no ilay Mesia zanak' Andriamanitra (Joa. 28.13-24; Mat. 26.63). Nohelohina ho faty noho izay heverina ho fitenenan-dratsy an' Adriamanitra nataony i Jesoa ary nanamafy sady nanaiky an' ilay didim-pitsarana i Pôntio Pilato. Nentina tany Gôlgôta i Jesoa hovonoina. Maty sady nalevina ny harivan' io andro io ihany izy rehefa nohomboana tamin' ny hazo fijaliana.
Fitsanganan' i Jesoa ho velona sy iraka nampanaovinyModifier
Fitsanganan' i Jesoa amin' ny maty, nataon'i Hans Rottenhammer, taonjato faha-16.
Nisy anjely nanakodia ny vato nanakatona ny fasana (Mat. 28.2). Ka nony nandeha tany am-pasana ry Maria Magdalena sy Maria renin' i Jakoba mba hanosotra menaka manitra ny vatan' i Jesoa dia tsy hitany tao ny fatiny (Mar. 16.1). Zatovolahy niakanjo fotsy no hitany tao am-pasana izay nilaza tamin' izy ireo fa efa velona i Jesoa ka nitsangana (Mar. 16.5). Taorian' izany dia nifankahita amin' ireo mpianany i Jesoa ka naniraka azy ireo mba hitory ny filazantsara sy hampianatra ny firenena rehetra eran' izao tontolo izao sady hanao batisa azy amin' ny anaran' ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina (Mat. 28.19). Efapolo andro taorian' ny nitsanganany amin' ny maty dia niakatra ho any an-danitra i Jesoa (Asa 1. 2-12).
Ny finoan' ny Kristiana momba an' i JesoaModifier
Ny Kristiana dia mino fa zanak' Andriamanitra i Jesoa nefa ny fiangonana tsirairay dia samy manana ny fomba fampianarany. Ny taranja teôlôjika ianarana sy andinihana ny amin' izany dia ny kristôlôjia (izay momba ny toetr' i Jesoa ampifandraisina amin'Andriamanitra sy amin' ny olona).
Fiakaran' i Jesoa ho any an-danitra, nataon'i Gebhard Fugel, 1893 na1894.
Araka ny Filazantsara dia efa nisy talohan' izao rehetra izao i Jesoa. Izy no ilay Teny (na Logos) izay nahariana izao tontolo izao. Izy no ilay Teny tonga nofo. Notorontoronina tamin' ny Fanahy Masina izy ka naterak'i Maria virijiny. Zanak' Andriamanitra izy. Nitsangana ho velona rehefa maty noho ny fanomboana azy tamin' ny hazo fijaliana hanavotany ny olombelona. Ho avy indray i Jesoa amin' ny andro farany hitsara ny olona rehetra ka handray izay mino azy ho any amin' ny Rainy.
Ny finoana ny maha Andriamanitra an' i JesoaModifier
Ny fampianarana "mahitsy" momba ny TriniteModifier
Talohan'ny Konsily voalohany tao Nikea dia tsy tena nazava tsara ny amin’ ny Trinite. Mbola samy nanana ny heviny ny teôlôjiana. Nisy ny ady hevitra ary maro ireo nampangaina ho heretika (mpanao fampianaran-diso) noho ny fiheverany ny amin' i Jesoa sy ny Fanahy Masina tsy mifanaraka amin' ny fanapahan-kevitra ôfisialin' ny Fiangonana tamin' izay. Nandritra ireo kônsily sasany no niadian-kevitra sy nanapahana izay tokony hinoan’ ny Kristiana momba ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Ho an' ny fiangonana kristiana mino ny Trinite dia Andriamanitra tonga nofo i Jesoa Kristy. Tsy zanak' Andriamanitra fotsiny ihany izy fa Andriamanitra Zanaka. Personan' Andriamanitra i Jesoa sahala amin' ny Ray sy ny Fanahy Masina izay samy persona avokoa. Manana toetra roa izy: sady olona no Andriamanitra. Naterak' Andriamanitra Ray fa tsy natao i Jesoa Kristy.
Ny fiangonana katôlika sy ny fiangonana ôrtôdôksa sy ny fiangonana prôtestanta ary ny ankamaroan' ireo fiagonana ara-pilazantsara dia mino ny Trinite.
Fampianarana hafa momba ny maha Andriamanitra an' i JesoaModifier
Ny apôlinarisma sy ny mônôfizisma
Tsy manana fanahin' olona i Jesoa fa fanahin' Andriamanitra, dia ilay Teny (grika: Logos) izay niditra tao amin’ny tenan’olombelona nisolo ny fanahy maha-olona an'i Jesoa. Ny vatan’i Kristy dia vatana nampanjarina fanahy sady nomem-boninahitra. Tsy manana natiora roa ao amina persona iray i Jesoa. Izany no fampianarana ao amin'ny apôlinarisma. Ny kônsily tao Rôma tamin'ny taona 382 no nanamelohana ny apôlinarisma.
Ny mônofizisma kosa dia milaza fa ny Zanaka dia tsy manana persona roa ka ny iray ho personan'Andriamanitra ary ny iray ho personan'olombelona. Persona tokana manana natioran'Andriamanitra tokana izay nitelina ny natioran’olombelona i Jesoa. Noho izany dia tokana ihany ny natioran’i Jesoa Kristy, dia ny natiora maha-Andriamanitra azy. Ny Konsily voalohany tao Kalkedoa no nanamelohana ny mônofizisma.
Araka ny fampianaran'ny nestôrianisma dia manana natiora roa misaraka i Jesoa Kristy ka ny mikasika ny natiorany iray dia tsy mahazo ny natiorany hafa. Persona roa miavaka fa tsy tokana no ao amin'i Jesoa Kristy. Noho izany i Maria dia tsy renin’i Jesoa araka ny natiora sy personan’ Andriamanitra ananany fa reniny amin’ny maha olona azy, izany hoe tsy renin’Andriamanitra i Maria. Midika koa izany fa tsy Andriamanitra no voahombo sy nijaly fa ilay Jesoa olombelona.
Ny triteisma dia teny enti-miampanga ny mpomba ny Trinite izay lazaina fa manana Andriamanitra telo. Ny mpino ny Trinite dia nolazaina fa triteista. Izany no hevitr' ireo fiangonana atao hoe "tsy trinitariana". Nisy ihany ary misy koa ireo izay tena nampianatra fa ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia Andriamanitra telo samy manana ny persônany sy ny natiorany avy nefa mifameno. Ohatra amin' izany ny fampianaran' ny Olomasin' ny Andro Farany.
Ny tsy finoana ny maha Andriamanitra an' i JesoaModifier
Misy ny fiangonana izay mihevitra fa ny teny hoe zanak' Andriamanitra dia sarinteny fotsiny na teny azo ampiharina amin' ny olona rehetra izay mino an' Andriamanitra sy manao ny sitrapony. Noho izany, hoy izy ireo, ny finoana ny Trinite dia finoana andriamanitra maro ka anisan' ny fahotana izany. Zavaboarin' Andriamanitra tahaka ny zavaboary rehetra i Jesoa. Misy amin' ireo fiangonana ireo ny manao an' i Jesoa Kristy ho olona fotsiny fa natsangan' Andriamanitra ho zanany.
Ny firehana teo amin' ny tantaraModifier
Araka ny arianisma dia tsy mitovy ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady ny Ray ihany no tena Andriamantra, izay sady tsy nateraka no tsy noforonina. Tsy mitovy natiora amin’Andriamanitra ny Zanaka sady tsy mandrakizay ny fisiany satria noforonina izy. Olombelona natsangan’Andriamanitra ny Zanaka ka misy ampahan-toetran’Andriamanitra fa tsy Andriamanitra.
Ny sobôrdinatianisma (frantsay: subordinatianisme) dia finoana tany am-piandohan’ny kristianisma izay milaza fa eo ambany fahefan’ny Ray ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Fanampin'izany koa dia noforonin'Andriamanitra ny Zanaka fa tsy naterany.
Araka ny fampianaran'ny anômeisma, ny Ray sy ny Zanaka dia tsy misy itovizany (homos: “mifanahaka”; anomos: “tsy mitovy”). Ilay Tsy Nateraka no Andriamanitra. Ny Ray sy ny Zanaka dia hery nanatanterahana ny Famoronana. Tsy Andriamanitra ny Ray sy ny Zanaka fa fiseho roa samy hafan’Andriamanitra. Ilay Nateraka dia noforonin’ny Ray sady namorona ny Fanahy Masina.
Araka ny fampianaran'ny hômeisma, ny Zanaka dia misy fifanahafana natiora amin'ny Ray nefa tsy mitovy aminy. Tsy nohazavain’ny mpanao an’io fampianarana io izany fifanahafana izany.
Araka ny fampianaran'ny adôptianisma dia tsy tonga zanak’Andriamanitra i Jesoa raha tsy nanomboka teo amin’ny fanaovan’i Jaona batisa (batemy) azy teo amin’ny onin’i Jôrdana. Zanaka natsangan’Andriamanitra i Jesoa fa tsy Andriamanitra. Olombelona i Jesoa.
Amin' izao andro vaovao izao dia maromaro ihany ny fiangonana mitsipaka ny maha Andriamanitra an' i Jesoa, ka ireto misy ohatra amin' izany:
ny Vavolombelon' i Jehovah (ho an’ izy ireo dia tsy iza i Jesoa fa ny anjely Mikaela, na i Abadona na i Apoliona ihany);
ny Kristadelfiana (eng.: Christadelphians);
ny Siantista Kristiana (eng.: Christian Scientists);
ny Mpianatra ny Baibolin' ny Mangirandratsy (eng.: Dawn Bible Students);
ny Fiangonana Velon' Andriamanitra (eng.: Living Church of God);
ny Fiangonan' i Iahveh (eng.: Assemblies of Yahweh).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesoa_ao_amin%27_ny_kristianisma&oldid=1010352"
Dernière modification le 27 Martsa 2021, à 12:35
Voaova farany tamin'ny 27 Martsa 2021 amin'ny 12:35 ity pejy ity.